မျက်နှာဖောင်းခြင်းကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
ပါးဖောင်းခြင်းကြောင့် Selfie ဆွဲတဲ့အခါ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပုံရဖို့တော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ၀ိတ်တက်လာတာလားလို့ ကွန်မန့်လာပေးမယ့် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ရန်ကိုကလည်း ကြောက်ရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးက ၀ိတ်တက်လာခြင်းကြောင့် ပါးဖောင်းဖောင်းဖြစ်လာတဲ့သူတွေ၊ ပါးဖောင်းတာကို မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ဆောင်းပါးမှာပါတဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်လေးတွေသုံးပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးလှပစေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ (သဘာ၀အတိုင်း နဂိုပါးဖောင်းတိုင်း မလှဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်)****
လေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်ရင် ဘော်ဒီ၀ိတ်ကျသလို မျက်နှာဖောင်း၂အစ်၂မဖြစ်တော့တာ သတိထားမိကြမှာပါ။ ကယ်လိုရီတက်လာပြီး ကိုယ်စားသလောက်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ရင်တော့ မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေဟာ လည်ပင်း၊ မျက်နှာ နဲ့ မေးရိုးတဝိုက်မှာ စုတတ်ပါတယ်။ မျက်နှာကျပုံလှလှလေးဖြစ်ချင်ရင်တော့ အရင်ဆုံးဘော်ဒီ၀ိတ်ကိုထိန်းပေးသင့်ပါတယ်။
သင်ဟာ တစ်ရက်တာအတွက် သောက်သင့်တဲ့ ရေပမာဏကို မသောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ခနာကိုယ်ဟာ ရေပြတ်လတ်မှုကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ရေအချို့ကို သဘာ၀အတိုင်းနေရာအချို့မှာ စုပ်ယူသိမ်းဆည်းပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ သင့်မျက်နှာပဲပေါ့။ အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့ရက်တွေမှာ၊ ပါတီတက်ပြီးနောက်ကျတဲ့ရက်တွေမှာ သင့်မျက်နှာဟာ နဂိုထက်ဖောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ရက်မှာ ဖန်ခွက် ၇ခွက် ၈ခွက် (သို့) ၂လီတာလောက်သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ သင် night out ပဲထွက်ထွက်၊ ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်ရှုပ်ရှုပ် ရေကို ဒီနှုန်းအတိုင်းသောက်ပေးရင် မျက်နှာဖောင်းအစ်တာ သက်သာမှာပါ။ ကယ်လစီယမ်ဓာတ်ကြွယ်၀သောအစိမ်းရောင် အသီးအရွက်နဲ့ပန်းပွင့်စိမ်း (Broccoli)၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်တို့ကို စားပေးခြင်းကလည်း ရေဓာတ်စုပ်ယူမှု သိုလှောင်မှုကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
အရက်သောက်ခြင်းဟာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။ များများသောက်လေခန္ဓာကိုယ်ဟာ ရေဓာတ်များများခန်းလေပါပဲ။ ဘီယာ၊ ၀ိုင် (သို့) ဝီစကီ ဘယ်လိုအမျိုးစားပဲ သောက်သောက် အယ်လ်ကိုဟောပါ၀င်ရင်တော့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တတ်ပါတယ်။ အသင့်ဖျော်ကော်ဖီတွေမှာလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ သကြားနဲ့ ကဖင်းကြောင့် ရေဓာတ်ခန်းမှုဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ်အပြင်ထွက်လို့ ရေဆာတဲ့အခါ..အကောင်းဆုံးကတော့ ဆိုဒါတွေ အသင့်ဖျော်အအေးတွထက် ရေကိုသာသောက်သုံးခြင်းဖြင့် မျက်နှာသွယ်သွယ်လှလှလေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နဂိုမသွယ်ရင်တောင် မဖာင်း၊ မအစ်တော့ဘူးပေါ့။
မျက်နှာဖောင်းအစ်ခြင်းရဲ့ နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ hypothyroidism လို့ခေါ်တဲ့ သိုင်းရိုက်ဟော်မုန်းလုံလောက်စွာ ထုတ်လုပ်မှုမရှိတာပါပဲ။ အသားအရေ ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း ၊ကဖင်းဓာတ်များခြင်း၊ သကြားစားသုံးမှုများခြင်း၊ ပရိုတင်းဓာတ်ချို.တဲ့ခြင်း၊ အသင့်စား အစားအစာတွေ စားသုံးခြင်းနှင့် ဆား သုံးစွဲမှုများခြင်းဟာလည်း လိုအပ်တဲ့ သိုင်းရိုက်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။
မျက်နှာကြွက်သားများအတွက် နေ့တိုင်း Facial Exercise လုပ်ပေးပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကအကြောတွေဆန့်ပေးဖို့လိုသလို မျက်နှာက အကြော ကြွက်သားများကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ပြုံးခြင်းဟာ အရာများစွာပြီးမြောက်စေသလို ကိုယ့်ပတ်၀န်းကျင်က လူတွေကိုလဲ စိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Facial Exercise လုပ်ခြင်းတမျိုးပဲပေါ့။
၁။ဘာဖြစ်လို့ မျက်နှာက ဖောင်းအစ်လာတာလဲ?
ခနွာကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာရင် မျက်နှာလည်း ဖောင်းလာ အသားပြည့်လာတတ်ပါတယ်။ မျှတတဲ့စားသောက်နေထိုင်မှု မဟုတ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်မလုပ်ခြင်း၊ အသက်အရွယ်ကြောင့်သောလည်းကောင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်သော်လည်းကောင်း မျက်နှာဖောင်းအစ်တတ်ပါတယ်။
၂။ပီကေဝါးခြင်းက မျက်နှာက အဆီကို ချပေးနိုင်သလား?
လေ့လာတွေ.ရှိမှုများထဲမှ အနည်းငယ်ကသာ ပီကေဝါးခြင်းက မျက်နှာက ကယ်လိုရီကိုချပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စားသောက်မှုပုံစံနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကသာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိရောက်စွာပြောင်းလဲစေမှာပါ။
၃။ပီကေဝါးခြင်းက မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်ခြင်းကိုရော ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသလား?
ပီကေဝါးခြင်းက မျက်နှာအဆီကို သိသာစွာ မလျော့ချနိုင်ပေမယ့် မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာနိုင်စေပြီး မျက်နှာကြွက်သားနဲ့ မေးရိုးတို့အတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ တန်ဆေးလွန်ဘေးမို့အချိန်တိုင်းတော့ ပီကေမဝါးသင့်ပါဘူး။
www-efm-net,pinkmirror-com မှ Article အား YourFitster Team မှ ဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်သည်။
၀လာလို့ ပါးဖောင်းဖောင်းဖြစ်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေအတွက် ဒီပို့စ်လေးကို Like & Share လုပ်ပြီး မျှ၀ေလိုက်ပါအုံးနော်